स्मरणशक्ति बढाउने ५ अचुक उपाय
धेरैजसो हामी सम्झने शक्ति कमजोर छ भनिरहन्छौँ । केहि चिज किन्न बजार जान्छौँ तर त्यहाँ पुगेर भुल्छौँ कि के लिनु छ । कोही धेरै दिनपछि भेट्दा उसको नाम भुल्छौँ । एउटा कोठाबाट उठेर अर्को कोठामा विशेष कामको लागि जान्छौँ र त्यहाँ पुगेर के कामको लागि आएको भन्ने नै भुल्छौँ ।
वैजानिकहरुले दशकौंदेखि स्मरणशक्ति बलियो बनाउने तरीका खोजिरहेका छन् । अनुसन्धानबाट केही कुरा सामुन्ने आएको छ । यस तरीकालाई अपनाएर हामी हाम्रो सम्झने शक्ति अझ बलियो बनाउन सक्छौं ।
१. पछाडी फर्केर हेर्नुहोस्
धेरैजसो सल्ला दिइन्छ कि पुराना कुरा भुलेर अगाडी बढाैँ तर वैज्ञानिक मान्छन् कि पुराना कुरा दोहो-याउनाले हाम्रो सम्झने शक्ति बढ्छ । यसबारे भएका अनुसन्धानले यो इसारा गर्छ की हामी जब पुराना यादहरुलाई आफ्नो दिमागमा दोहो-याउँछौ तब त्यो कुराहरु हाम्रो दिमागमा रजिस्टर हुन्छ । त्यसैले तपाई पनि सधैँ अगाडीकोमात्र सोच नराखेर पछाडी फर्केर पनि हेर्ने कोशिश गर्नुहोस् ।
२. तस्वीर बनाउनुहोस्
किनमेल गर्न निस्कनु पूर्व हामी धेरैजसो सामानको लिस्ट बनाउछौँ । तर सम्झने शक्ति बलियो बनाउनु छ भने सामानको नाम लेख्नुभन्दा ती सामानहरुको तस्वीर बनाउनुहोस् । जो मानिसले यस्तो गर्छन् उनीहरुको स्मरणशक्ति बलियो भएको देखिन्छ । यसले डिमेन्सियाका बिरामीलाई पनि फाइदा पु-याउँछ । वैज्ञानिक भन्छन् जब हामीले कुनै तस्वीर बनाउछौँ त्यो चीजको आकार प्रकारको बारेमा बढी सोच्छौँ । यसप्रकार हाम्रो दिमागले त्यो कुरालाई राम्रोसँग समात्छ ।
३. व्यायाम गर्नुहोस् तर सही समयमा
यो कुरा साबित भइसकेको छ की नियमित रुपमा व्यायाम गर्नाले स्मरणशक्ति राम्रो हुन्छ । नियमित रुपमा दौड्दा मेमोरी बढ्छ । अनुसन्धान भन्छ, तर यसको लागि सहि समय हुनुपर्छ । यसबाट सम्झने शक्ति बढाउन अझ सजिलो हुन्छ । त्यो समय के हुनुपर्छ योबारे वैज्ञानिकले रिसर्च गरिरहेका छन् ।
४. केही नगर्नुहोस्
हेरियट वाट यूनिभर्सिटीकी माइकेला डेवरले यसबारेमा एक अनुसन्धान गरेकी थिइन् । यदि स्वास्थ्य मानिसले केही याद गरेपछि तुरुन्त ब्रेक लिन्छन् भने उनीहरुलाई त्यो चिज धेरै याद हुन्छ भन्ने उनले आफूले गरेको अनुसन्धानमा पाइन् । तपाई पनि प्रयास गर्नुहोस्, केहीसमय पढेर वा लेखेर भ्याएपछि केहीबेर दिमागलाई शान्त छोडिदिनुहोस् । केही नगर्नुहोस् । यत्तिकै बस्नुहोस् वा पल्टिनुहोस् । यसले तपाईको स्मरणशक्ति बढाउन मदत पु-याउँछ ।
५. थोरै समय एक निद्रा सुत्नुहोस्
स्मरणशक्ति बलियो बनाउने अर्को उपाय भनेको थोरैबेर सुत्नुपनि हो । धेरै यस्ता रिसर्च छन् जसले प्रमाणित गरेका छन् की एक निद्रा सुत्दा हाम्रो सरणशक्ति धेरै नै बढ्छ । तर, यसको एक शर्त छ जसले नियमित रुपमा यस्तो गर्छ उसले नै एकै छिन् सुत्नुकाे फाइदा उठाउन सक्छ यदि तपाई लामो समयसम्म एक निद्रा सुत्ने बानी पार्नुहुन्छ भनेमात्र स्मरणशक्ति बढाउन मदत पुग्छ । त्यसैले यी पाँच सजिला उपाय अपनाएर तपाई आफ्नो स्मरणशक्ति बढाउन सक्नुहुन्छ ।